Saad Scalper EA - Best Forex EA si | Expert etozu | FX ígwè ọrụ
Saad Scalper EA na-a n'ụzọ zuru ezu na akpaghị aka Forex Expert Advisor na ejiri abụọ azum n'otu oge na ya pụrụ iche style mee ọtụtụ trades uru.
a Forex EA scalps pips site na ya ike atụmatụ.
Trades ndị na-adịghị aga nke ọma na ahịa ala isi na-edozi na a dị iche iche na pụrụ iche n'ụzọ ịchịkwa hara nhatanha losses.
Ọ na-arụ ọrụ na ọtụtụ ego n'otu oge na nsonaazụ kacha mma maka EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, AUDCAD na AUDUSD. Jiri ya maka anọ ise ego ụzọ abụọ maka kwesịrị ekwesị ibu.
EURUSD M1 n'ihi na elu ibu
EURUSD M5 maka kacha nta ize ndụ ibu
GBPUSD M1 n'ihi na elu ibu
GBPUSD M5 maka kacha nta ize ndụ ibu
USDCHF M5 maka kacha nta ize ndụ ibu
USDCAD M5 maka kacha nta ize ndụ ibu
AUDCAD M5 maka kacha nta ize ndụ ibu
Saad Scalper EA - Aro
Nkwenye iji VPS maka 24 / 7 na-agba ọsọ ụgbọ ala iji zere ihe ọ bụla na-eme ka onye nwe ụlọ dabere.
Zere trading n'oge mkpebi ndị dị mkpa si US Federation na European Central Bank.
Saad Scalper EA - paramita
1 mgbanwe mgbanwe
Oke ahia nke ahia obula - Nhọrọ 0.01 ahọrọ. Debe ya dika oke ego gi.
LotModeAuto - Debe Ụgha / Eziokwu dịka ọ bụla ị chọrọ.
% Ewu - A na-agbakọta Lot dịka otu usoro Lot = AccountEquity * Risk / 100 / 1000 Ọ bụrụ na a setịpụ LotModeAuto Ezi. Chepụta Lot Size dị ka gị chọrọ na Risk Factor.
Pskpọkpọ iche iche - Ahịa kachasị mma ịchọta 100 maka 5 Decimal Broker dịka 10 pips. Debe ya dika nyocha gi.
Kwụsị nkwụsị - Uru Nhọrọ bụ 0. Ọ na-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ejiri martingale mee ihe na Ụgha. Dịka nyocha ọ bụla ọ naghị atụ aro ya. A gụnyere njirimara a dị ka arịrịọ nke ndị ọrụ dị iche iche. Jiri ya dị ka ahụmahụ gị.
Nọmba Ime Anwansi - Ọnụ ọgụgụ ime anwansi kwesịrị iche na otu MT4 ọnụ.
Tinye Martingale ụdị
Iwu Ahịa Martingale - Ezi / Ụgha
Nyefee Martingale - Ezi / Ụgha
Biko mara na: Ị nwere ike iji otu Martingale n'otu oge. Ọ bụrụ na ha abụọ bụ eziokwu, martingale agaghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji akara StopLoss na-echekwa ụgha. Ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ eziokwu, njide StopLoss agaghị arụ ọrụ.
3 nke di nkenke - O guzobere nha maka ahia Market Martingale
Nzọụkwụ na Pips: Ahịa 500 a ma ama maka 5 Decimal Broker dị ka 50 Pips. Ị nwere ike ịmepụta ya dịka ị na-atụle akpa Lot gị, Ụgwọ Nhaba na Ego Kwụrụ Ahịa Ọnụ Ahịa maka iji nchekwa martingale mee ihe iji zere oku oku.
Vidiyo nke nkiti nke 4 - Ọ na-edobe usoro maka njigide Ndozi Martingale
Nzọụkwụ Pips - Ahịa 700 a ma ama maka 5 Decimal Broker dị ka 70 Pips. Ị nwere ike ịmepụta ya dịka ị na-atụle akpa Lot gị, Ụgwọ Nhaba na Ego Kwụrụ Ahịa Ọnụ Ahịa maka iji nchekwa martingale mee ihe iji zere oku oku.
Mepee Iwu Iwu - Nhọrọ 400 ahọrọ. Uru a dabeere na Nzọụkwụ na Pips.
Ihe Nlere 1 Reell - O buru na usoro izizi bu Rere ma zuo oke nke uzo ozo nke 700 karia usoro izizi nke mbu Pending Order Sell na - ebido usoro 400 karia ọkwa Ree gara aga.
Ihe Nleta 2 Zuta - oburu na ihe ahia mbu zutara ma bia n’azu usoro ihe ozo nke 700 karia usoro izizi nke Pending Order Buy bu ihe ndi 400 n’atu n'okpuru ọkwa mbu gara.
Jide Order Mmebi na ụbọchị - Debe ndokwa na-echere Ịkwụsị oge na ụbọchị. Ụbọchị 30 a na-ahọrọ.
Tinye ntinye ederede
Denye Mmanụ Ese - Ezi / Ụgha
Olu nke olu - Ntọala ọkwa ma ọ bụrụ Na-etinye Mpịakọta Ọgụ bụ Ezi.
A nabatara ntinye akwụkwọ iji zere ọ bụla ahịa n'oge nnukwu volatility na ahịa mkpọtụ.
Ihe di nkenke nke 6 - Trading Hrs Range na GMT
Trading Round elekere 24Hr - Ezi / Ụgha
Bido oge azụmaahịa na Hr - 0
Kwụsị Azụmaahịa na Hr - 23
MKPU Trader PRO Review